Vaovao Alahady 07 Jiona 2020 – FPMA Toulouse
Vaovao Alahady 07 Jiona 2020
FANASANA ZAIKABE SVKI-SLKI
« Fa manana izao rakitra izao amin’ny vilany tany izahay, mba ho an’Andriamanitra ny halehiben’ny hery , fa tsy ho aminay ( 2 korintiana 4 : 7)
. Mifarana amin’ny 26 Jolay ny fisoratana anarana koa azonareo atonina ny filohan’ireo sampana 2 ireo. Fihaonam-be faharoan’ny SVKI SLKI ity ka manantena antsika ho tonga maro be.
FIOFANANA sy FOTOAM-BAVAKA
Mitohy ny fiofanana SAP KNPL Soritr’Asampiangonana Komity Nasionaly Projet Laika-isak’Alarobia @ 8 ora alina @ alalan’ny Confcall . Izany dia fiofanana sy fampianaram-pinoana natao ho an’ny vahoakan’ny FPMA manontolo koa entanina isika eto Toulouse hanaraka izany.
Mikasika ny fotoanan’ny fotoam-bavaka nasionaly amin’ny 4 ora sy 7 ora hariva isan’andro dia azontsika jerena ao amin’ny tranokala https://fpma.church.news ny vaovao rehetra. Manentana antsika hanaraka izany hatrany.
Ary rehefa levona ny hoditro, izao simba izao, sady afaka amin’ ny nofoko aho, dia hahita an’ Andriamanitra; Eny, izaho no hahita Azy, ary ny masoko no hijery, fa tsy olon-kafa. Efa matim-paniriana ny saiko ato anatiko. ( Joba 19 :26-27)
Amin’ny fo feno fankasitrahana an’Andriamanitra no ampandrenesanay anareo fa nantsoiny hody any aminy ny reny malalanay Emilie RAZARISOA
Ny zoma faha 29 Mey 2020, tany Madagasikara rehefa nivahiny 79 taona teto an-tany
Hoy ny zanany :
RAMAMONJISOA Heriniaina mivady sy ny zanany,
COLLONGUES Hanitra mivady sy ny zanany,
RAMAMONJISOA Harilantotiana sy ny zanany,
RAZAFIMAMONJY Hajavero mivady sy ny zanany,
» Ry Mpihaino vavaka ô, Ianao no hohatonin’ny nofo rehetra. » ( Salamo 65/2)
Mampatsiahy antsika fa misy ihany koa ny rojombavaka isan’andro.
Indro ny rohy hahitana ny tabilao misy ireo antom-bavaka amin’ity herinndro ity
« Miantsoa fanati-tsitrapo, eny, ambarao izany! » Amosa 4 :5
Ny fandoavana ny adidy sy rakitra ary fanati-pisaorana dia azontsika atao @ alalan’ny
– Chèque alefa any @ Mpitambolan’ny Fiangonnana
– Carte bancaire amin’ny alalan’ny rohy Hello Asso. Izany dia afaka atao koa ao @ tranonkalan’ny Fiangonana fpma-toulouse.com « rubrique Vondronasa Vola sy fananana » izay hahitanao torolanana manazava ny fanaovana azy.
Iangaviana indrindra isika mba hanoratra ny anton’ireo fandraisana anjara na ho rakitra, na adidy na raki-pisaorana
Dia tsarovy ry Havana fa ny manome amin’ny fifaliana no ankasitrahan’ny Tompo
Araka ny fivoriamben’ny mpandray t@ volana Martsa 2019 dia mampandre antsika fa mitohy ny tetikasa @ firosoana fananana trano fiangonana.
Hisy vaomiera manokana hatsangana handinika lalina momba izany. Ny fanomezana na tonom-bola tiantsika hatao ho fanohanana izany asa izany dia alefa ao amin’ny sous compte « Trano fiangonana » koa asio « libellé Trano_ anarana » ny fandoavam-bola hatao. Ny numéro IBAN sous-compte FPMA Toulouse dia ho hitantsika ao amin’ny site internet.
Hisy fampianarana Katekomena androany amin’ny 4 ora tolakandro amin’ny alalan’ny visioconférence.
Hisy ny études bibliques ny Talata 09 Jona amin’ny 8 ora hariva amin’ny alalan’ny visioconférence.
Ny Fanompoam-pivavahana manaraka dia amin’ny alahady 14 Jona 2020 ao amin’ny temple du Salin ho an’izay nisoratra anarana ary direct amin’ny Youtube ho an’ny hafa manomboka amin’ny 3 ora tolakandro
Ny Voninahitra ho an’Andriamanitra irery ihany